Dewar Factory - China Dewar Vagadziri uye vanotengesa
Maumbirwo erabhodhoro redhi Iyo tangi yemukati uye rekunze ganda reDewar rakagadzirwa nesimbi isina chinhu, uye yemukati tangi rutsigiro sisitimu inogadzirwa nesimbi isina tsvina kugadzirisa simba uye zvinobudirira kudzikisa kupisa kurasikirwa. Iko kune kudziya kwekuisa dura pakati petangi remukati uye yekunze goko. Multi-layer thermal kuputira zvinhu uye yakakwira vhoriyamu chengetedza iyo mvura yekuchengetera nguva. Iyo yakavakirwa-mukati vaporizer yakarongedzwa mukati megobvu kushandura cryogenic mvura kuita gasi, uye iyo yakavakirwa-mukati ...
Chimiro cheDewar flask Iyo yemukati tangi uye yekunze goko reDewar zvakagadzirwa nesimbi isina simbi, uye yemukati tangi rutsigiro sisitimu inogadzirwa nesimbi isina simbi yekuvandudza simba uye zvinobudirira kudzikisa kupisa kurasikirwa. Iko kune kudziya kwekuisa dura pakati petangi remukati uye yekunze goko. Multi-layer thermal kuputira zvinhu uye yakakwira vhoriyamu chengetedza iyo mvura yekuchengetera nguva. Iyo yakavakirwa-mukati vaporizer yakarongedzwa mukati megobvu kushandura cryogenic mvura kuita gasi, uye iyo yakavakirwa-mukati su ...
Chimiro cheDewar flask Iyo yemukati tangi uye yekunze goko reDewar zvakagadzirwa nesimbi isina simbi, uye yemukati tangi rutsigiro sisitimu inogadzirwa nesimbi isina simbi yekuvandudza simba uye zvinobudirira kudzikisa kupisa kurasikirwa. Iko kune kudziya kwekuisa dura pakati petangi remukati uye yekunze goko. Multi-layer thermal kuputira zvinhu uye yakakwira vhoriyamu chengetedza iyo mvura yekuchengetera nguva. Iyo yakavakirwa-mukati vaporizer yakarongedzwa mukati megobvu kushandura cryogenic mvura kuita gasi, uye iyo yakavakirwa-mukati ...